Dr.Mild အမေးနှင့်အဖြေ – Babi Mild Moms Club
Archive for Category: Dr.Mild အမေးနှင့်အဖြေ
Home Archive for Category: Dr.Mild အမေးနှင့်အဖြေ
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၃၆)
1. Phyo Phyo ဆရာရှင့် ကလေးက ၅ လပါ။ အရင်ကလို နို့ထွက်မကောင်းလို့ ဘာသောက်သင့်ပါသလဲ။ မိခင်နို့ထွက်များစေဖို့ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းသာ ဆက်တိုက်ပါ… နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ နို့တိုက်ကျွေးပါ… အကြိမ်ရေ စိပ်စိပ်တိုက်ကျွေးခြင်းကလည်း ကလေးစုပ်ယူမှုကြောင့် မိခင်နို့ပိုထွက်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်… မိခင်က ရေများများသောက် အစားအစာ အာဟာရ ပြည့်ဝအောင်စားပါ… တဖြည်းဖြည်း ကလေးအတွက် နို့အလုံအလောက် ထွက်လာပါလိမ့်မယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. Ei KS ဆရာ သားသားက ၂၂ရက်သားရပါပြီ။ ချက်ကနည်းနည်းစိုနေသေးလို့ ရေတစ်ခါပဲချိုးပေးရသေးပါတယ်။ ချက်လေးစိုနေတာ ဘာတွေသုံးရမလဲသိချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဝါဂွမ်းသန့်သန့်လေးကို ရေနွေးလေးနဲ့ စွတ်ပြီး သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်… သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါ ချက်ကလေးကို ခြောက်သွေ့အောင် ပြန်သုတ်ပေးရပါမယ်… အောက်က Link မှာ […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၃၅)
1. ဆောင်းနှင်း စံပယ် ဆရာရှင့်သားလေးက ၅ လကျော်ပါ။ မျက်စိအရအ်းကြောက်ပါတယ်။ သူ့ရှေ့လက်ခုတ်တီးရင် မျက်စိပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်ပါတယ်။ ပျောက်ပါ့မလား စိုးရိမ်လို့ပါရှင့်။ လက်ခုပ်တီးလို့ မျက်လုံး ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်တာဟာ ပုံမှန် တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်… စိတ်ပူစရာ မဟုတ်ပါဘူး… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. Myo Lay ဆရာရှင့် ညီမသားသားက ၈ လပါ။ ည ၉ နာရီကနေ မနက် ၆ နာရီလောက်ထိကို ဆီး ၆ ခါလောက် ညတိုင်းသွားပါတယ်။ သိပ်လည်းမအိပ်ပါဘူး စိုးရိမ်ရလားဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာတွေ မရှိရင်တော့ စိတ်ပူစရာ မရှိပါဘူး… တကယ်လို့ ကလေးဖျားတာ၊ ချမ်းတုန်တာ၊ အီတာ စတာတွေ ရှိရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်… […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၃၄)
1. Htoo Khant Lin ဆရာရှင့် သားလေးက ၁ နှစ်နဲ့ ၉ လပါ။ သန်ချဆေးတိုက်လို့ရပါလားရှင့်။ ဘယ်လိုဆေးမျိုးတိုက်ရမလဲဆိုတာကို ညွှန်ပြပေးပါအုံးနော်။ ဖြစ်ပွားတဲ့ သန်ကောင် အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ဆေးတိုက်ပုံမတူညီပါဘူး… အဖြစ်များတဲ့ သန်လုံးကောင် Roundworm အတွက်သန်ချတဲ့အခါ အသက် ၁ နှစ်ကျော် ကလေးအတွက် Mebendazole 100 mg ကို တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်နဲ့ ၃ ရက် တိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. Ei Phyu သမီးက ၁ နှစ်ခွဲရှိပါပြီ။ နို့ပွေးပေါက်တာ ၈ လလောက်ထဲက ခုထိမပျောက်ဘူးဆရာ။ ဆေးလိမ်ရင်ခဏတော့ ပျောက်တယ်။ ၁ ရက် ၂ ရက်နေရင် […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၃၃)
1. ကောင်းခန့် ကျော် ဆရာ ခင်ဗျ။ သားလေးက ၁နှစ်နဲ့၆လပါ။ ကျန်းမာရေးကောင်းပြီ။ ၀ပါတယ်။ ညာဘက် မျက်စိလေးတစ်ဘက်က အတွင်းဘက် တခါတခါ ကပ်ဝင်နေ့လို့. လမ်းညွှန်ပေးကြပါခင်ဗျ။ မျက်စိလို အရေးကြီး အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တာကြောင့် စနစ်တကျ စမ်းသပ် စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်… ပြောတဲ့ ပုံစံအရ ကလေးကို ဆရာဝန်နဲ့ မြန်မြန် သွားရောက် ပြသဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. Sann Myat Seim ဆရာရှင့် သမီးလေးက၂လကျော်ပါပြီ။ ခေါင်းမှာ ဂျပ်တည်နေတာ ယားတယ်နဲ့တူပါတယ်။ ကုတ်ကုတ်နေလို့ ဘာဆေးလိမ်ပေးရမလဲရှင့်။ ယားယံနေရင် Calamine Lotion လေးလိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်… ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာ ပိုတိတိကျကျသိဖို့နဲ့ ကလေးမြန်မြန် သက်သာအောင် အရေပြားအထူးကု […]